Owaxoshwa yi-IFP ePhalamende ujoyine i-ANC | Isolezwe
Owaxoshwa yi-IFP ePhalamende ujoyine i-ANC
Isolezwe / 17 January 2013, 4:26pm /
UNKK Pat Lebenya-Ntanzi owayengumholi we- IFP Youth Brigade eyilungu lephalamende eKapa usejoyine i- ANC. lapha uthathwe ngoMgqibelo emgubheni|we-ANC weminyaka engu-101 eThekwini
OwayeNGUMHOLI we-IFP Youth Brigade, uNkk Pat Lebenya-Ntanzi, usejoyine uKhongolose ngemuva kokungagculiseki kwakhe ngokukhishwa ePhalamende ngendlela engacacile ngonyaka odlule.
UNkk Lebenya-Ntanzi ubesehole uphiko lwentsha isikhathi eside ku-IFP elimele nasePhalamende kanti ubengomunye wabaholi besifazane baleli qembu abebekhombisa ukudlondlobala ezinhlakeni zale nhlangano.
Lo mholi ubonakale okokuqala embuthanweni we-ANC wenkulumo kaMengameli Jacob Zuma, iJanuary 8 Statement kanti ubehlezi endaweni yezipheshethwa ebinabaholi bamazinga ehlukene kaKhongolose, e-Absa Stadium, eThekwini.
“Ngingakuqinisekisa ukuthi sengiyilungu le-ANC egatsheni laseWestville, eThekwini. Ngijoyine kuwona lo nyaka esiwuqalayo. Ngaphandle kwalokho ngithathe isinqumo sokuthi ngikhohlwe yikho konke okubi okwenzeke kimi kodwa ngigxile kwinqubekela phambili ngizihlanganise neqembu elizimisele ngokuthuthukisa izimpilo zabantu,” kusho uNkk Lebenya-Ntanzi.
Echaza uthe akuzange kumphathe kahle ukukhishwa kwakhe ePhalamende yi-IFP ngoba akazange aziswe kodwa wathi ezifikela ezoqhubeka nomsebenzi wakhe wasePhalamende wathola incwadi ehhovisi likaMnuz Koos Van der Merwe eyayimyalela ukuthi akaselona ilungu lePhalamende ngoba iqembu lase limsusile.
“Okwenzeka kwaba yinto engangingayilindele, ikakhulukazi kumuntu osezingeni lami ebuholini beqembu. Angizange ngibizwe ngisho ekomitini lokuqondiswa izigwegwe ukuze ngitshelwe ukuthi ngenzeni ngiziphendulele ngaphambi kokuba ngikhonjwe indlela kodwa bavele banginika incwadi engazisa ukuthi bayangisusa ePhalamende,” kusho uNkk Ntanzi.
Isigameko sokususwa kwakhe eKapa engazelele kwakungesisona esokuqala. Kwathi kunengqungquthela yabesifazane be-IFP ngo-2011 oNdini kwavela imibiko yokuthi uphoqiwe ukuba ahoxe esikhundleni ayephakanyiselwe kuso ngo-elethu yizithunywa ezazimfuna.
Ngemuva kwaleyo ngqungquthela wayekade eqeda kubeka phansi izintambo zokuhola intsha kwathatha uMnuz Mkhuleko Hlengwa.
Ngesikhathi esesuswa ePhalamende i-IFP yaziphendulela ngokuthi wayengeke esakwazi ukuqhubeka nokuba yilungu lePhalamende ngoba alukho uhlaka lweqembu ayesekulo. Wayekade eyiswe eKapa ngoba engumholi wentsha.
UNkk Lebenya-Ntanzi uthe kuningi akufundile kwezombusazwe eseku-IFP ngakho ngeke akwazi ukwenaba ngokuningi ngaphandle kokuthi usebheke phambili.
Uthe isinqumo sakhe sokushiya i-IFP sibe esokuthi ubengafuni ukuzisola ngokuhlala ekubeni umnyango uvaliwe kodwa ibe ikhona eminye evuliwe.